Matxaf ku yaalla magaalada Hamburg oo magaciisu la dhaho MARKK ayaa waxaa 23/10/2019 illaa 12/01/2020 lagu soo bandhigayaa taariikho & codad laga duubay dad Afrikaan ah oo Jarmalka 100 sano kahor ku noolaan jiray – Al-Hurriyah
Article Updated:	November 14, 2019
Matxaf ku yaalla magaalada Hamburg oo magaciisu la dhaho MARKK ayaa waxaa 23/10/2019 illaa 12/01/2020 lagu soo bandhigayaa taariikho & codad laga duubay dad Afrikaan ah oo Jarmalka 100 sano kahor ku noolaan jiray, codadkaasi markii ugu horeysay ayaa sanadkaan 2019 af Jarmal loo tarjumay.
Si goonni ah bandhigaan waxaa diirada loogu soo saarayaa nin dhallinyaro ah oo aqoonyahan ah oo Soomaali ah oo magaciisu Maxamed Nuur la dhaho.
Maxamed Nuur wuxuu markiisii ugu horeysay yimid magaalada Cadan ee dalka Yemen, halkaasi wuxuu 1910 ku dalbaday inuu macallin Af-Soomaaliga dhiga u noqdo caruurta dad la addoonsado oo magaalooyinka lagu soo bandhigi jiray show ahaan camalna loo daawan jiray.
Sidaasi ayuu caruurtaasi macallin ugu ahaa, kadibna caruurtii iyo waalidiintoodiiba waxaa loosoo qaaday Jarmalka si halkaanna suuqyada loogu soo bandhigo, asigana wuu soo raacay, balse markii uu Jarmalka yimid waxaa isku dhacay oo is khilaafay asiga iyo ninkii watay dadka lasoo addoonsaday.
Kadibna Maxamed Nuur asigoo lacag la’aan iyo dokumenti la’aan ah ayay Jarmalka ku kala tageen ninkii iyo kooxdii uusoo raacay.
Intaas kadib dantu waxay ku qasabtay inuu Model noqdo oo uu sidaas ku shaqeysto, maadaama ay markaasi Afrikaan badan aysan dalkaani joogin, wuxuu Maxamed Nuur ka dhignaa ka Model ahaan inuu yahay sawirka saxda ah ama kan khayaaliga ah ee ragga Afrikaanka ah. Sawiro laga sameeyay asiga ayaa Düsseldorf yaalla xataa.
Dagaalkii koowaad ee adduunka markuu socday ayaa ka ajnabi ahaan la qabtay Maxamed Nuur, kadibna lagu xiray xabsi meel Ruhleben la dhaho ku yaalla oo magaaladda Berlin ka tirsan.
Halkaasina wuxuu kula kulmay Carl Meinhof oo ah nin Jarmal ah oo ku taqasusay luqadaha, gaar ahaan luqadaha Afrikaanka, waxaana halkaasi cod looga duubay Maxamed Nuur.
Kadibna 1917 Maxamed Nuur wuxuu kaaliye u noqday Carl Meinhof, wuxuuna ka shaqo bilaabay Machadka luqadaha wadamada la gumeysto ee magaalada Hamburg.
Wuxuuna Maxamed Nuur si weyn uga qeyb qaatay diyaarin Naxwe Af-Soomaali ah oo halkaasi lagu diyaariyay.
Marka bandhigaan magaalada Hamburg lagu qabanayo ee soconaya 23/10/2019 illaa 12/01/2020 waxaa diiradda si weyn loogu saarayaa Maxamed Nuur, noloshiisa, socdaalkiisa iwm, waxaana lagu soo bandhigayaa meesha qoraallo uu qoray, sawiradiisa, codadkiisa iwm.
Waa bandhig cajiib ah iyo taariikh nin dhallinyaro Soomaali ah oo xilli adag dalkaan soo maray kuna soo noolaaday.
*Maxamed Nuur waa sawirka hoose qofka fallaarta jaallaha ah aan ku aadinay.
Waxaana rajeynaa dadka u dhow halkaasi inay bandhiggaasi ka qeyb gali doonaan insha Allah.
Photo: Deutsches Historisches Museum/MARKK.
Xigasho – Ahmed Kadiye
MADAXWEYNE FARMAAJO OO SAXIIXAY SHARCIGA MAAREYNTA MAALIYADDA GUUD IYO SHARCIGA SHIRKADAHA GANACSIGA…